Ny zava-nitranga tao Koety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2018 6:12 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Febroary 2007)
Nankafy ny toetr'andro mahafinaritra tamin'ity herinandro ity i Koety. Marobe ireo olona nanararaotra izany sy nandeha nitsangatsangana tany amin'ny tany efitra.
Tsy hafa amin'izany i Engineeroo. Nanatevin-daharana ireo olona nanangana trano lay sy nitondra sakafo sy zava-pisotro izy mba hankafy ny fiandohan'ny lohataona. Tsy izany ihany fa naka sary avana izy!
Yesterday when I was in our camp(المخيم) after the lovely rain … rainbow was shown a full half circle…. actually, it was two of them and I captured both…. 🙂 here is one of them and you can See my shadow … 😉
Raha tany amin'ny lasinay aho omaly (المخيم) taorian'ny orana mahafinaritra… hita tsara ny tapa-paribolan'ny avana…..nisy roa tamin'izany ary nalaiko sary izy roa …. 🙂 ity ny iray amin'izy ireo ahatazananao ny aloko….;)
Tsy naharaka ny Foaran'ny Varotra InfoConnect ? Chillnite nitantara izany tao amin'ny bilaoginy Chillnite.
Vao avy tafaverina tamin'ny fampiratiana InfoConnect 2007 tao amin'ny tokotanin'ny foara Mishref. Nahoana aho no tsy gaga mahita ny tsy fisian'ny fampiratiana jiro mahafinaritra? Tsy mihevitra aho fa matotra ny sehatra teknolojiam-baovao ao Koety mba ho anisan'ny anaovana fampiratiana ao Koety.
The Criticizer ao amin'ny MacaholiQ8 niresaka momba ny fiankinan-doha hafa ananany- ny mifoka Shisha! Saingy misy ny vaovao ratsy momba ny zavatra ankafiziny hafa.
Ny ankamaroan'ny mpifoka shisha sy ny mpitaingina “gahawi” dia mahafantatra ny Digol Cafe ka ity ny vaovao; hifarana ny resadresako farany satria horavàna ao anatin'ny herinandro vitsy ny tranobe
Nanana fampisehoana hira Japoney tamin'ny herinandro lasa izahay tao Koety, ka manana sary sy tatitra kely momba izany i Joeymaniaa.
Alarobia 31-1-2007 : hipoka olona ny toerana, nisy olona nitsangana foana aza nandritra ny fampisehoana manontolo ary mipetraka amin'ny tany ny sasany amin'izy ireo, tsy nanan-kevitra ny amin'izay hitako aho.
K The Kuwaiti manome fitantarana maro momba ny fiara. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny tsingerintaona faha-60 ny Ferrari, ankalazaina anaty angeso ao Koety ny andron'ny Ferrari.
Nanam-potoana hamoahana ny sariko tamin'ny ‘Tsingerintaonan'ny Ferrari’ ao amin'ny pejiko Flickr ihany aho. Lany vatoaratra (bateria) ny fakàn-tsariko ary nanomboka nampiasa ny fakàn-tsarin'ny namako aho.
Al-Zayani nanatrika ny ‘Andron'ny Ferrari’ mba hankalaza ny tsingerintaona faha-60-n'ny Ferrari manerantany (1947-2007). Tsy maintsy manao fiatoana manerantany izy ireo miaraka amin'ny Ferrari mitandahatra mandehandeha.